नर्वेमा कोरोना बिरामीलाई झ्यालबाट हेरेर फर्किन्छन् आफन्त – Bhindai Kura
नर्वेमा कोरोना बिरामीलाई झ्यालबाट हेरेर फर्किन्छन् आफन्त
By Bhindai Kura May 3, 2020 May 3, 2020
मेरो नाम सम्झना थापा हो । म पेसाले स्टाफ नर्स हुँ । सन् २००४ देखि नर्वेमा बस्दै आएकी छु । मेरो घर पोखरा हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम), पोखरा नर्सिङ क्याम्पसमा अध्ययन गरेकी हुँ । नेपालमा नर्सिङ सकेपछि दुई वर्षमात्र काम गर्ने अवसर पाएँ । छोटो समयमा मैले गण्डकी क्षेत्रीय अस्पताल र फेवा सिटी अस्पतालमा काम गरेर धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । नर्वेमा भने नर्सको रुपमा दर्ता भएर सन् २००७ देखि काम गर्दैछु ।
अहिले विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासमा छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र त्यसबाट मानिसको जिन्दगीमा परेको असर विश्वभर नै उस्तै छ । केही महिनाअगाडि साधारण लाग्ने दिनचर्या अहिले एकदमै फरक भएको छ । त्यसको असर नर्वेमा पनि परेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको दैनिकी पहिलेकोभन्दा कठिन हुँदै गएको छ । UjyaloOnline मा समाचार छ
राजधानी ओस्लोमा रहेको मैले काम गर्ने नर्सिङ होम कोरोना उपचार केन्द्र बनेपछि दैनिकी बिलकुलै फेरिएको छ । बि.स. २०७६ चैत १८ गतेदेखि निरन्तर कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचारमा छु ।
पहिला पुनर्स्थापना वार्डमा काम गर्दा र अहिले कोभिड–१९ ‘पोजेटिभ’ भएका बिरामीसँग काम गर्दाको अनुभव निकै फरक छ । पहिला हामी स्टाफ नर्स एउटा बिरामीको कोठामा ८ घण्टाको ड्युटी गर्दा धेरै पटक बाहिर भित्र गथ्र्यौँ । अहिले भित्र जानुभन्दा पहिला धेरै पटक सोचविचार गरेर, धेरै तयारी गरेर र चाहिने सबै सामान जुटाएर मात्र जानुपर्ने हुन्छ । आफूलाई रोग नसरोस् अनि परिवार र आफ्नो सम्पर्कमा आउने मान्छेको पनि निकै चिन्ता हुने रहेछ । त्यसैले
सङ्क्रमणबाट बच्ने सबै उपकरण लगाएर काम गर्दा निकै असजिलो महसुस हुन्छ । अनि कति पटक त बिरामीलाई हामीले भनेका कुरा सुन्न र बुझ्न असजिलो भएको देखिन्छ । अझ डिमेन्सिया (बिर्सने रोग) लागेका बिरामीलाई हामी स्टाफ नर्स किन व्यक्तिगत सुरक्षा कवच (पीपीई) लगाएर उनीहरु भएको ठाउँमा गयौँ भन्ने कुरा बुझाउन पनि गार्हो भइरहेको हुन्छ ।
पहिला बिरामीका आफ्ना मान्छे बेला बेलामा भेट्न आउने क्रम चलिरहन्थ्यो । अहिले उनीहरुका आफन्तलाई भेट्न आउने अनुमति छैन । त्यसैले धेरै बिरामी आफ्नो परिवारको सदस्यलाई भेट्न नपाउँदा निकै दुःखी देखिन्छन् । हामीले उनीहरुलाई ‘फेसटाइम’लगायत अरु तरिकाबाट आफ्नो परिवारसँग कुरा गराइदिने गर्छौँ । तर पनि प्रत्यक्ष रुपमा भेटेजस्तो नहुने भएकोले केही आफन्त झ्याल बाहिरबाट हात हल्लाउँदै आफ्नो मान्छेलाई हेरेर फर्कन्छन् । त्यो देख्दा निकै नरमाइलो लाग्छ । तर यदि बिरामीलाई सार्है च्याप्यो र ज्यान जाने अवस्था आयो भने आफ्नो मान्छेले भेट्न आउने व्यवस्था नर्वेमा गरिएको छ ।
यहाँ अन्य युरोपियन देशभन्दा अलि फरक छ । जुन बिरामी र उसको आफन्तको लागि राम्रो कुरा हो । यस्तो अवस्थामा एक पटकमा दुई जनाले बिरामीलाई भेट्न पाउँछन् । हामी आफैँले उनीहरुलाई पीपीई लगाउन सहयोग गरेर भित्र लैजान्छौँ ।
मैले काम गरिरहेको वार्डमा ३४ वर्षदेखि ९७ वर्षसम्मका बिरामी छन् । त्यसमा पनि बढी उमेरका वृद्धवृद्धा कोभिड–१९ सँगै अन्य रोगसँग पनि लडिरहेका छन् । डिमेन्सिया भएका बिरामी पनि केही मात्रामा छन् । यस्तै सानो उमेरका बिरामीहरु चाहिँ जन्मिँदादेखि नै शारीरिक अपाङगता भएका देखिन्छन् ।
मैले काम गर्ने वार्डमा कोभिड–१९का बिरामी आउने जाने क्रम चलिरहेकै छ । जसमध्ये १४ जना बिरामी सन्चो भएर घर फर्किएका छन् । तीन जना गम्भीर भएर हाम्रोबाट अर्कोमा ‘रेफर’ गरिएको छ । पाँच जनाले कोभिड–१९ कै कारण ज्यान गुमाएका छन् । ती पाँच जनामा ७८ देखि ८६ वर्ष उमेरका बिरामी थिए । त्यसमा पनि उनीहरु पहिलादेखि नै मधुमेह, उच्च रक्तचाप र पक्षघातलगायतका दीर्घ रोगी थिए । खोकी र ज्वरोका कारण उनीहरुले तरल पदार्थ पनि खान सक्दैनथे । अरु बिरामी जसको पहिलादेखि नै शारीरिक र मानसिक अवस्था राम्रो थियो उनीहरु छिटो सन्चो भएर फर्किसकेका छन् ।
बिरामी सन्चो भएर घर फर्किन लागेको बेलामा उनीहरुमा देखिएको खुसीले भने आफूले गरेको सबै दुःख बिर्साउँदो रहेछ । अहिलेसम्म हाम्रो वार्डमा काम गरेको कुनै पनि कर्मचारीलाई कोभिड–१९ सरेको छैन । त्यसको लागि हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छौँ । उपचारमा संलग्न हामीलाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नदेखिँदा हामी निकै खुसी छौँ । तर, काम गर्दै जाँदा रोग सर्छ कि भन्ने डर भइहाल्छ । सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्दा असजिलो भने भइरहेकै छ ।
अहिले नर्वेमा अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको सङ्ख्या घट्दै गएपनि हाम्रो वार्डमा अझै २२ जना बिरामी छन् । यो सङ्ख्या बढ्छ कि घट्छ भन्ने कौतुहलता सबै कर्मचारीमा छ । बाँकी त आउने दिनले नै देखाउला ।
घरमा साना बच्चा भएकाले सुरुका दिनमा मनमा केही डर र त्रास थियो । तर अहिले बानी परिसकेको छ । यस आपत्को बेला सबैजना त्राहीत्राही भइरहेको बेला कोरोना सङ्क्रमितसँग मात्रै काम गर्दा, उनीहरुलाई सेवा दिन पाउँदा र आफू अझै स्वस्थ हुँदा आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठान्छु ।
नर्वेजस्तो सम्पन्न देश जहाँ सबै स्वास्थ्य सेवा सबैको लागि निःशुल्क छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई यो रोग सर्नबाट बचाउनको लागि चाहिने सबै सामान उपलब्ध हुने भएकाले होला हामीमध्ये कोही पनि यस रोगबाट पीडित भएका छैनौँ ।
हामीले समाचार हेरेर यो देशमा यति जना मर्यो, अर्को देशमा झन् धेरैको ज्यान गयो भनेर आत्तिनुभन्दा कसरी यो रोगलाई फैलनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो रोग सरिहाल्यो भने कस्तो व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी खतरा छ भन्ने कुरा पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म यो रोगले ठूलो रुप लिएको छैन । तर हामी नेपाली धेरैजसो ठूलो परिवारमा सँगै बस्ने र परिवारमा उमेर बढी भएका बुवा, आमा, हजुरबुवा र हजुरआमालाई पहिलेदेखि नै अरु विभिन्न रोग छन् भने उहाँहरुलाई जोगाउने कोसिस गर्नुपर्छ ।
हामीले रोग लागिहाले पनि सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । स्वस्थ व्यक्तिले पनि आफ्नो ख्याल बढी नै गर्नुपर्छ । सकेसम्म व्यायाम गर्ने र शरीरलाई चाहिने जति आराम गर्नु पनि जरुरी छ । कोभिड–१९ एउटा सामान्य रोग हो । तर, छिटै सर्ने रोग भएकोले तपाईंले आफ्नो सुरक्षा गरेर मात्र हुँदैन । अरुलाई जोगाउने दायित्व पनि तपाईंसँग हुन्छ ।
हामी स्वास्थ्यकर्मी सबैभन्दा जोखिममा छौँ । सैनिकका लागि युद्ध मैदानजस्तै हामीलाई लड्नैपर्ने बाध्यता छ । यो रोग लागेपछि निको पार्ने औषधि बनिसकेको छैन । त्यसैले लागेपछि उपचार गर्छु भन्नुभन्दा लाग्नै नदिनु उत्तम हुन्छ । सबैले आफ्नो ठाउँबाट कोभिड–१९ नियन्त्रणको प्रयास गरौँ ।
(थापासँग सजना तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
कोरोना भाइरस : भारतमा एकै दिन थप १०० जनाको मृत्यु
जब सिमेन्ट ‘मिक्सर’ भित्रबाट १८ मजदुर निस्किए…
Nepal 26,660 106 0
India 2,64,7663 51,045 0
Malaysia 8596 121 94
Japan 18024 963 56
Qatar 90,778 104 6
Italy 2,39,410 36,644 3,856
China 81,518 3,305 742
USA 678,266 34,641 2,666
Spain 87,956 19,315 4,165
Germany 66,885 4,093 1,581
Iran 41,495 2,757 3,206
France 44,550 17,920 4,273
S. Korea 9,786 162 59
Switzerland 14,352 282 301
UK 103,093 13,729 163
Netherlands 9,762 639 914
Austria 8,411 86 187
Belgium 10,836 431 867
Norway 4,054 23 84
Portugal 5,170 100 89
Sweden 3,447 105 239
Australia 4,514 19 23
Brazil 3,904 114 296
Canada 5,655 92 120
एक इण्डियनले भन्योः तेरो देशको झण्डालाई १० हजार सेयर गराएर देखा
अब पैसा नभय पनि सित्तैमा फोन गर्न र नेट चलाउन सकिने
केही सोचौ केही गरौ
वास्तविक जीवनका ‘गजिनी’ : ३० सेकेन्डको स्मरण शक्ति भएका व्यक्ति
क्वारेन्टाइनमा राखिएका १९३ नेपालीलाई १७ दिनपछि घर फर्काइदै:कसैमा पनि सङ्क्रमण देखिएन
आफूविरुद्ध झुटो आरोप लगाइएको भन्दै बाँस्कोटाद्वारा मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर
च्याम्पियन्स लिग फुटबलः नकआउट चरणको पहिलो खेलमा बार्सिलोना मुश्किलले हारबाट जोगियो
कोरोना भाइरसबाट बच्न संवेदनशील बनौं: मुख्यमन्त्री पौडेल
सरकारले करको भारमात्रै थप्यो : विज्ञ
एसीसी टी–२० क्रिकेटको पहिलो खेलमा शनिबार नेपालले मलेसियासित खेल्दै
अदालती सुनुवाइमा सयौँ साङ्ला छोडिएपछि…
हेटौँडा–९ मा ग्यास बुलेटको ठक्करबाट बाबु छोरीको ज्यान गयो
म १७ वर्षकी नाबालिग हुँदाखेरि मलाई जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरे
प्रसारण लाइनको तारमा पुगेर दिनभर ‘तनाव दिएका’ व्यक्तिको उद्धार
‘संसदीय निर्वाचनमा अन्य कुनै वामपन्थी पार्टीसँग गठबन्धन हुँदैन’
पृथ्वीराजमार्ग सडक भासिँदा कार र माेटरसाईकल नदीमा खस्याे, दुई जनाको शव फेला
मुग्लिन नारायणघाट सडकखण्ड सुचारु
जाजरकोटमा जीप दुघर्टना अपेडट : तीनजनाको मृत्यु, घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्दार
गोली बोकेर जापान उड्न लागेकी नेपाली विमानस्थलबाट पक्राउ
“ लकडाउन खुलेपनि मास्क नखोलौ “
नेपालको सांस्कृतिक पर्व साउने सक्रांन्ति
‘अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा माडी मणि बन्छ’
यति सब भैसकेपछि तपाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चिमा बसिरहन मिल्छ ?
Copyright © Bhindaikura.com | All rights reserved. Theme: Eximious Magazine by Themesaga